ओलम्पिक च्याम्पियन ओक्साना Baiul: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन र क्यारियर
सबै अमेरिकी स्केटिङ गर्ने 1994 महिला संख्या मा Lillehammer ओलम्पिक स्वर्ण पदक भविष्यवाणी नैन्सी Kerrigan। फलस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधि चाँदी सन्तुष्ट थियो, र 16 वर्षीया युक्रेनी ओक्साना Baiul जित्यो। ओलम्पिक 1994, युक्रेन पहिलो सुन ल्याए जवान खेलाडी कमाए। यो विजय गर्न पृष्ठभूमि के थियो, र कसरी खेल क्यारियर च्याम्पियन जारी? को खेलाडी व्यक्तिगत जीवन के थियो? यो सबै लेखमा छलफल गरिनेछ।
Oksana Baiul - skater, जसको जीवनी रोचक छ, संतृप्त। ओक्साना जीवन अफवाहहरु, intrigues, भ्रष्टाचार भरिएको छ किनभने यो उनको प्रशंसक थुप्रै चासो छ। तर हामीलाई सबै क्रममा गरौं ...
भविष्यमा ओलम्पिक च्याम्पियन ओक्साना Baiul नोभेम्बर 16, 1977 Dnepropetrovsk मा जन्म भएको थियो। उनको आमा संग पुरानो केटी एक्लै बाँकी थिए दुई वर्ष मा, पिता वर्ष को एक जोडी मेरो आमा ओक्साना क्यान्सर को मृत्यु, परिवार छोडेर। पछि मृत्यु र उनको नातिनी खडा गर्ने हजुरआमा। 1991 मा, केटी शाब्दिक अर्थमा एउटा अनाथ बाँकी थियो। केटी बाँच्न कुनै ठाउँ थियो, र त्यो आफ्नो घर रिङ्क को बंक सुत्थ्यौं। यस्तो अवस्था ओक्साना Baiul मा बाँच्न कसरी गर्न सक्छ? जीवनी पछि प्रतिभाशाली केटी उनको Galina Zmievskaya ज्ञात विक्टर Petrenko स्केटिङ मानिसहरू गरेको आंकडा मा 1992 मा ओलम्पिक च्याम्पियन प्रशिक्षित गर्ने कोच, लगे भनेर हामीलाई बताउँछ। Oksana उहाँले घटक कार्यक्रम hopping लागि जिम्मेवार थियो, दोस्रो कोच वैलेन्टिन Nikolayev थियो।
Oksana Baiul: जीवनी, पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रिय सफलता
ओक्साना अनुसार, खेल को उच्चतम चुचुराहरूको पुगन मा सोभियत संघ को उनको विघटन र युक्रेन को पछि स्वतन्त्रता मदत, धेरै इंटरव्यू रूपमा व्यक्त गरे। यो संघ को टोली यसलाई प्राप्त गर्न असफल भयो, तर युक्रेनी महासंघ नै कीव र skater सहभागी थिए पूर्व-चित्रित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू मा Bajul कारण।
1993 मा, सोभियत आंकडा skater ओक्साना Baiul हेलसिन्की मा युरोपेली च्याम्पियनसिप मा शुरू भयो बेहतरीन। एक मिनेट र एक आधा कुनै पनि कार्यक्रम खेलाडी को सुरू भएपछि पछि unlaced बुट संग चढेर कि फेला परेन। फेरि perekatal कार्यक्रम सोधेर Bajul न्यायाधीशहरूले 'तालिका सम्म चलाए। बैठक पछि, न्यायाधीश त्यसो गर्न दिनुभयो। फलस्वरूप, आफ्नो debut युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई ओक्साना मात्र गाढा चमड़ी Frenchwoman Surie बोन गुमाउने, चाँदी जित्यो।
त्यही वर्ष, र Bajul debut प्राग दुनिया च्याम्पियनशिप मा। Skater arbitrators जटिलता र आफ्नो स्केटिङ को शान मारे। फलस्वरूप, ओक्साना पहिलो प्रयास मा प्रतियोगिताको सही जीत व्यवस्थित जो पहिलो debutante विश्व च्याम्पियनसिप, थियो। साथै, यो टूर्नामेंट धावक-अप लिए जो फ्रान्सेली BONA, संग पनि प्राप्त छ।
खेलाडीहरूलाई पत्ता लगाउन तिनीहरूलाई बीच अर्को युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई, कोपेनहेगन मा 1994 मा आयोजित मा बलियो छ जसले जारी राखे। फेरि यहाँ उहाँले फ्रान्सेली बोन Bajul जित्यो र दोस्रो भए। विशेषज्ञहरु यी दुई खेलाडीहरूलाई, साथै अमेरिकी नैन्सी Kerrigan Lillehammer-94 मा ओलम्पिक सुन लागि योग्य हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छन्। रूपमा नै ओक्साना Baiul देखाइएको? आंकडा skater लागि ओलम्पिक एक वास्तविक चुनौती भए ...
मुख्य प्रतिद्वन्द्वी 1994 मा ओलम्पिक मा अमेरिकी नैन्सी Kerrigan थियो। स्मरणीय छोटो कार्यक्रम, Galina Zmievskaya, Bajul दोस्रो स्थानमा ल्याए प्रतियोगिता को पहिलो दिन अमेरिकी आंकडा skater पछि नेतृत्व थियो एक कोच सेट।
अर्को दिन, ओक्साना प्रशिक्षण मा एक फोहर घटना भएको थियो। न्यानो-अप समयमा एक जर्मन आंकडा skater एक गम्भीर टकराव थियो Tatyana Shevchenko। बालिका प्रत्येक अन्य तिनीहरूले जम्प गर्न प्रयास रूपमा हेर्न छैन। झर्ने, तातियाना ओक्साना तिघ्रा बिग्रेको छ। त्यो टाँका आवश्यक। को खेलाडी पछाडिको मा बरफ मा एक मजबूत झटका देखि पनि ached। यी सबै समस्याहरूको ओलम्पिक च्याम्पियन-94 निर्धारण गर्ने थियो जो लामो कार्यक्रम, अघि मा दिन भयो छ।
ओक्साना संग एक साक्षात्कार मा उनले आफ्नो कोच Zmievskoy र Nikolayev, जहाँ तिनीहरूले कुनै पनि कार्यक्रम Bajul मा कार्य गर्ने कि नगर्ने निर्णय को कुरा सुनेका सम्झे। फलस्वरूप, यस कोच यसलाई बिहान सम्म प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ कि निष्कर्षमा आए।
अर्को अप्रिय पक्ष एक अनौठो पत्र थियो। faeces को सेतो पानामा पार चित्रित थियो, र तल पाठ किनभने यसले नै सामाग्री बनेको छ Bajul, एक च्याम्पियन बन्न कि पढ्छन्। त्यो कोच Galina Zmievskaya गर्न पत्र देखाए, तर त्यो उहाँले पैसा लिन भनेर यसो शुल्क आश्वासन दिनुभयो। त्यसपछि Bajul कार्य गर्न कटिबद्ध थियो।
ओक्साना अनुसार, बरफ मा बाहिर जानुअघि उनले एक अविश्वसनीय विश्वास बेग्लै चमक थियो। Skater निर्धक्क सबै तीन कूदता छ र संयोजन कार्यान्वयन र तीन खुट्टाको औंलासम्म पाश को प्रदर्शन पूरा गर्न थियो, तर दर्शक को हल्ला मार्फत कोच देखि चीखें सुने। Zmievskaya र Petrenko चिच्याए: "तपाईं संयोजन आवश्यक!" Bajul तुरुन्तै कार्यक्रम परिवर्तन र पछिल्लो टिप्पणी दुई तीन कूदता गाए। यो केवल न्यायाधीशहरूले आकलन लागि प्रतीक्षा रह्यो।
Oksana, रोक बिना कुर्सी मा बसे र, दुखाइ र स्नायु तनाव मा कराए। "हामी जित्यो।" म उनको, जसले यसो भने विक्टर Petrenko, सान्त्वना प्रविधी ओक्साना लागि मूल्यांकन को परिणाम निम्न दोस्रो, Kerrigan पछि थियो। सबै एक जर्मन न्यायाधीश जनवरी Hoffmann, छोटो कार्यक्रममा दोस्रो स्थानमा Bajul राख्नु गर्ने को आवाज सहमत भए। लामो कार्यक्रममा उहाँले पहिलो स्थिति skater राख्नुभयो। फलस्वरूप, न्यायाधीशहरूले को छ एक अमेरिकी पाँच समर्थकहरूको विरुद्ध युक्रेनी लागि प्राथमिकता व्यक्त गरे।
पुरस्कार समारोह skaters ढिलाइ भएको थियो। कसैले Bajul एक लामो समय को लागि माथि लुगा भने यो तथ्यलाई कारण छ कि अफवाह थाले। अमेरिकी Kerrigan कि किनकी यो अझै पनि whining हुनेछ, माथि पोशाक गर्न अर्थमा बनाउन गर्दैन joked। यो अमेरिकी टिभी च्यानल यी शब्दहरू देखाउनुभयो र सही Kerrigan को छवि खराब थियो विचारणीय छ।
को ओलम्पिक मा oksana Baiul अझै कुनै कुरा के जित्यो। वास्तवमा, आयोजकहरु को एक युक्रेनी विजय आशा थिएन, त्यसैले सबै hitches देशको झण्डा र राष्ट्रिय गान लागि खोज सम्बन्धित थिए।
त्यसैले triumphantly अवैतनिक क्यारियर ओक्साना Baiul समाप्त, र यो एक पेशेवर खेल मा गरियो।
अमेरिका जाने र एक पेशेवर क्यारियर सुरु
नर्वे मा ओलम्पिक मा थप, उज्यालो हात र Zmievskoy Nikolaev संग अमेरिका ओक्साना Baiul र विक्टर Petrenko सार्न एउटा सम्झौता हस्ताक्षर गरे। शरद ऋतु मा उनि लस भेगास मा एक बनाउन थियो। थप जवान केटी अंग्रेजी चिन्ने होइन, मौलिक पूर्णतया फरक देशमा आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न भएको थियो। प्रसिद्ध जुवा राजधानी मा ओक्साना को स्लट मिसिन मा आफ्नो भाग्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरे। उनको त्यहाँ नजिक र नाबालिग लागि जुवा को निषेधाज्ञा बारेमा प्रहरी सूचित गर्न खोजे। आफ्नो बहिनी - स्थिति प्रहरी भनेर ओक्साना भन्नुभयो जो विक्टर Petrenko, द्वारा सुरक्षित गरिएको थियो।
Bajul पछि कोच Galina Zmievskaya संग तरिका parted। तिनीहरूले शरद ऋतु कार्यक्रम dokatat र विभिन्न दिशामा गए। केटी एक्लै यसको शुल्क थाले। केही प्रदर्शन को लागि Bajul 10 000 डलर, तुरुन्तै सामाग्री राम्ररी हुनुको आंकडा skaters मा वृद्धि प्रभावित जो भुक्तानी। Oksana नयाँ जर्सी मा 17 तल्ला मा एक आरामदायक अपार्टमेन्ट पायो छ।
रक्सी प्रतिभाशाली मानिसहरूको धेरै बर्बाद, यो ओक्साना Baiul संग लगभग भयो। प्रेस धेरै सामाग्री घटना पिएको skater थिए। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को प्रसिद्ध Bajul आफ्नो मित्र Ararat Zakarian साथ सँगै पायो जसमा कार दुर्घटना भएको थियो। कार सडक बन्द भयो र एक रूख मा दुर्घटनाग्रस्त भयो। खुसीको कुरा, दुवै सदस्यहरूले दुर्घटना बाँचे, तर ओक्साना एक ड्राइभिङ लाइसेन्स को deprived गरिएको छ। अदालत लोक र रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था लागि अनिवार्य उपचार गर्न उनको सजाय सुनाई। तीन महिना ओलम्पिक च्याम्पियन पुनर्वास थियो।
खेल क्यारियर पुन: शुरू
नशेडी को निको, ओक्साना Baiul क्यारियर skater पुनः सुरु। नतालिया Linichuk - उहाँले उनको प्रसिद्ध रूसी कोच सहयोगको हात हस्तान्तरण। Oksana मास्को मा प्रशिक्षण दिन आए, र पछि त्यो अमेरिकी सारियो कि वैलेन्टिन Nikolayev सिकेका -, कोच ओलम्पिक सुन गर्न खेलाडी नेतृत्व। आफ्नो संघ पुनःस्थापित भएको थियो। को scandalous प्रतिष्ठा बावजुद ओक्साना सधैं अमेरिकी सार्वजनिक एक मनपर्ने थियो। अचम्मको कुरा छैन, तुरुन्तै बरफ आफ्नो फिर्ती पछि यो टम कोलिन्स को प्रसिद्ध शो मा लगे।
शो मा ओक्साना आफूले पाएको नयाँ ओलम्पिक च्याम्पियन, 19 वर्षीया इल्या Kulik भेटे। सम्बन्ध केटी एलियाले फाले जो पछि मात्र तीन हप्ता लामो थियो। अर्को धक्का skater ओक्साना Baiul चक्की सुतिरहेको को मद्दतले निर्णय बच्न। प्रयास आत्महत्या अमेरिकी प्रेस लागि अनुभूति थियो।
नयाँ प्रेम र नयाँ अलग
Kulikom ओक्साना zareklas संग जानेबेलामा पछि अब प्रेम पर्नु र एकदम लामो समय आफ्नो प्रतिज्ञा रोकिराखेको। 2000 मा, मा क्रिसमस पार्टी न्यूयोर्क मा, त्यो व्यापारी Evgeniem Sunikom, रूसी emigrants सन्तान भेटे। यो आंकडा स्केटिङ रुचि थियो Sunik, आफ्नो प्रेमी थियो थाहा थिएन कि उत्सुक छ। यो उहाँले ओक्साना bribed।
उनले पहिलो सबै एक सुन्दर महिला माथि यो देखे मानिस, र प्रसिद्ध खेलाडी भेटे। आफ्नो संघ पाँच वर्ष लामो थियो। यो समयमा, जोडी एक साधारण व्यापार छ। कम्पनी को उत्पादन मा लगे आंकडा स्केटिङ लागि सूट को।
जोडी अचानक माथि भङ्ग। ओक्साना भनेअनुसार spat त्यो आफ्नो पिता हेर्न गए जहाँ Dnepropetrovsk देखि उनको फिर्ती पछि तुरुन्तै देखा पर्यो। त्यहाँ जानेबेलामा जोडे धेरै संस्करणहरु छन्। सबैभन्दा जो संभावना यूजीन ओक्साना लिन नातेदार को इन्कार हुन मानिन्छ। तिनीहरूले लगातार खराब बंशाणु उल्लेख र तिनले उसलाई एउटा बच्चा सहन गर्न सक्ने तर्क।
कोच Bajul Valentina Nikolayeva अनुसार, यूजीन सही पत्नी ओक्साना यस्तो घमन्डी व्यक्ति व्यवस्था गर्न सकिएन भनेर गृहिणी बनाउन चाहन्थे।
यहूदी जरा खेलाडीहरूलाई
Oksana बुबा दुई वर्ष मेरो आमा छोडेर अर्को परिवार गए। एक वयस्क को रूप, त्यो उहाँलाई खोज्न निर्णय र आफ्नो पैतृक Dnepropetrovsk भेटिए। जीवन सर्गेई Bajul त्यहाँ उहाँले सबै आफ्नो जीवन पिए, सजिलो थियो। Oksana पनि भेटे र आफ्नो बाबुको हजुरआमा। पिता केटी जीवन पूर्णतया अनुपस्थित छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद उहाँले तिनलाई पेसा, पछि संख्या skater बारेमा समाचार पत्र लेख राखिएको। यहूदी - पिएको भएपछि, पिताजी भनेर हजुरआमा ओक्साना र उनको आमा उल्लेख गरे। यो केटी मा एक मजबूत प्रभाव गरे। संयुक्त राज्य अमेरिका ओक्साना मा आगमन म सभाघरमा गए। त्यहाँ उनको 32 औं जन्मदिन भेटे।
आज Bayul ओक्साना Sergeevna यहूदी दान भन्दा संरक्षण गरे जो ओडेसा मा छोराछोरीको घर, भौतिक समर्थन प्रदान।
संयुक्त राज्य अमेरिका Bajul उहाँले दुई पुस्तकहरू 1997 मा प्रकाशित को लेखक भयो। तिनीहरूलाई को एक, "ओक्साना: मेरो कथा" एक आत्मकथात्मक चरित्र थियो, अन्य "स्केटिङ को रहस्य" भनिएको छ।
Oksana Baiul: संग्रामहरू जीतेको, पदक र पुरस्कार
आफ्नो खेल क्यारियर मा Bajul युक्रेनको दुई-समय चाँदी युरोपेली च्याम्पियनसिप, विश्व च्याम्पियन को 1993 मा medalist को डबल च्याम्पियन भए, तर यसको मुख्य उपलब्धि पक्कै 1994 मा ओलम्पिक स्वर्ण पदक छ।
Skater युक्रेन को राष्ट्रपति को मानार्थ साइन छ लियोनिद Kravchuk, को ओलम्पिक मा विजय पछि तुरुन्तै जारी।
आज O. Bajul
2010 मा, ओक्साना युक्रेन आए र कोचिंग को संकाय मा विश्वविद्यालय गए। त्यो आंकडा स्केटिङ को घर मा आफ्नै स्कूल खोल्न, तर असफल भयो महासंघ संग एक साधारण भाषा फेला पार्न योजना थियो। यसबाहेक, ओक्साना संघर्ष पूर्व-कोच Galina Zmievskaya, 1997 देखि चल्छ जो वर्तमान दिनको लामो-उभिरहेको थियो। अदालत मा आज Bajul चोरी Zmievskaya र Petrenko विरुद्ध मुद्दा दाखिल गरेर पैसा फिर्ता गर्न (उनको विचारमा) प्रयास।
एकल ओक्साना अब Baiul? उनको प्रशंसक थुप्रै चासो व्यक्तिगत जीवन skater। Karlom Farinoy - अब इटालियन मूलका एक अमेरिकी व्यापारी संग एक नागरिक विवाह बस्न ओक्साना Baiul।
इतिहास ओक्साना Baiul धेरै रोमाञ्चक र रोचक। उनको जीवन माथि र तल को भरिएको छ। तीतो कप, त्यो पिउन ... थियो खैर, अब यो मात्र शुभकामना च्याम्पियन इच्छा रहन्छ!
जूलिया Gyuntel - सर्प महिला
Grigorev Konstantin: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
Bulavinov Vadim Evgenevich: जीवनी र जीवनको रोचक तथ्य
Sobyanin Sergey Semenovich: जीवनी, परिवार
अभिनेता अनातोली Ravikovitch: जीवनी, Filmography, परिवार
परिवहन कम्पनीहरु संग काम - माल र केही अन्य पक्षहरू प्राप्त गर्न वकील को शक्ति
कार्ड लागि सुरक्षा कोड के हो? कसरी भिषा कार्ड सुरक्षा कोड प्रयोग गर्ने?
स्वस्थ भोजन: चिकन स्तन कत्तिको प्रोटिन?
लेखक अलिस क्लोभर र उनको कामका विशेषताहरू
मूल्यांकन विशेषज्ञ: सुविधाहरू, विधि र को परिणाम
बलियो मान्छे - रूपमा हुनुपर्छ?
क्यासेट अंधा: अनुप्रयोग सुविधाहरू
एक व्यावहारिक दृष्टिकोण संग आभूषण द्वारा: कि आगो आपल छ
"Suprastin": वयस्क र बच्चाहरु मा अधिमात्रा
नरम छत को प्रकार। छत: समीक्षा
रूस राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली। "राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा" संघीय व्यवस्था
जिगर कसरी तलना यसलाई नरम र रसदार रहिरहन्छ भनेर?